News - Saamaynta ilaalinta deegaanka ee shay la taaban karo
Mid ka mid ah macaamiisheena ayaa i weydiiyay: 'sidee wax soo saarkaagu u socdaan? Weli ma wanaagsan tahay?
taasi waxay iga dhigeysaa inaan ogaado in Shiinaha ilaalinta deegaanka ay durba saameyn weyn ku yeelatay wax soo saarka kiimikada sida shamiinka la taaban karo ee Shiinaha.
Aan kuu soo bandhigo bilowgii.
Sida aynu wada ogsoonahay, Shiinuhu si dhakhso leh ayey u horumaraan sanadahan, dhanka kale, dhibaatada deegaanka ee sii kordheysa iyo khatarta sii kordheysa. Iskudarsashada la taaban karo, sida sodium naphthalene formaldehyde, polycarboxylate superplasticizer, iwm iyo wax soo saarkooda ceyriin waxay keeneysaa biyo badan iyo wasakheynta hawada.
Sida jiilka labaad ee la taaban karo ee la taaban karo, sodium naphthalene formaldehyde, alaabtiisa ceyriin, waxaa jira naphthalene iyo formaldehyde.
Sida jiilka udambeeya ee la taaban karo, polycarboxylate superplasticizer, had iyo jeer waxaa jira ur qariib ah oo ku wareegsan warshad superplasticizer polycarboxylate.
Maamulka Shiinaha ayaa bilaabay inay ogaadaan in tani aysan ahayn dariiqa saxda ah ee horumarinta dhaqaalaha, waxay bilaabeen inay dhisaan koox kormeerta deegaanka ah si ay u xalliyaan dhibaatada wasakhda.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah warshadaha wasakhda culus, warshad wax soo saar badan oo la taaban karo oo la taaban karo oo aan liisan ganacsi lahayn ama iyada oo aan loo marin dariiq sax ah habka xakamaynta wasakhda ayaa lagu qasbay in la xidho.
Tani waxay horseed u tahay qiimaha kororka shaybaarka si dhakhso ah u kordha. Qaar ka mid ah wershada qashinka la taaban karo ayaa leh amarro, laakiin ma jiraan wax cayriin oo ku filan oo wax soo saar ah.
Ugu dambeyntii, si aan kuu xaqiijiyo, haa, wax soo saarkeennu waa mid joogto u ah shay la taaban karo.